Dos na Don’ts of Reflective 3D Photography - LucidPix
Ochichi nke LucidPix
Mmemme Ndị Okike
Gịnị bụ LucidPix?
Kitị Digital Press
Dos na Don’ts of Reflective 3D Photography
Ihe Eserese na Ihe Ngosiyo nke foto 3D
Ptmalite ntụgharị nke isiokwu dị na mmiri nwere ike ime ka ọmarịcha foto. Mgbe agbanwere onyonyo 3D, eserese eserese na-atụgharị bụrụ ntụgharị dị ịtụnanya, na-egosipụta isiokwu gị ma na ihu na nchegharị. Ọ nwere ike isi ike ịnweta foto ziri ezi maka foto na-atụgharị uche nke na-atụgharị nke ọma, yabụ, ụfọdụ ndị ga - eme na enweghị enyemaka iji nyere gị aka ị see foto 3D gị zuru oke.
Mee: Nọ n’etiti isiokwu ahụ
Itinye isiokwu gị na mpaghara elu-etiti nke etiti gị na -emepụta ọdịdị na-atọ ụtọ ma nwee mmetụta. Ihe ndị mepere emepe nwere ike ịmepụta nguzozi mara mma maka foto gị. Tụgharị foto ị na-atụgharị uche na eserese 3D ga-enyere isiokwu gị aka ma bulie ụmụazụ gị aka.
Emela: Gbanwee usoro ma ọ bụ ihe gburugburu
Anya mmadu di uto ighota okirikiri zuru oke. Ọ dịkwa mma ịhụ ịhụ ọ bụghị okirikiri ndị zuru oke. Maka ụbụrụ anyị mara mma zuru oke na ịchọkarị izu oke, ọ nwere ike isi ike ịmegharị foto ị na-atụgharị anya na foto 3D ma ọ bụrụ na ntụgharị ahụ nwere ihe dị okirikiri ma ọ bụ usoro. Dị ka foto dị n'okpuru ebe a, arch nke àkwà mmiri na-agbagọ na ntụgharị. Agbanyeghị na nke a anaghị eme mgbe niile, ma ọ bụrụ na ọ naghị emebi mmetụta 3D, ị nwere ike ịchọrọ izere akụkụ ọ bụla na ntụgharị iji nyere aka hụ na ntụgharị 3D dị ọcha.
Mee: Foto dị na mbubreyo
Obi abụọ adịghị ya na agba nke ọdịda anyanwụ na-eme maka ọmarịcha foto, mana agba ndị a nwekwara ike inye aka na-eme ka onyinyo na-egosipụta. Mgbe agbanwere onyonyo onyonyo mara mma ka ọ bụrụ onyonyo 3D, agba na-amalite ịmị ma ma elu ma ala etiti etiti ahụ, nke na-emepụta ọmarịcha foto ọdịda anyanwụ 3D.
Emela: Refzọ Nlere Ọma
Mgbe ị na-atụgharị foto 2D oge niile na foto 3D, ọ nwere ike isiri ike ijide obere nke kachasị mma na foto ụfọdụ. Dị ka akụkụ, a ga-agbagọ eriri ndị a n'ụzọ dị mfe ka ha na-emegharị foto ka ịlele nsonaazụ 3D. Na ntụgharị 3D, o siri ike ijide nkọwa nke ahịrị dị mma. Dịka egosipụtara na ihe atụ dị n’okpuru ebe a, ọnụ na-ekwuchite n’ịnya igwe kwụ otu ebe siri ike igosipụta nke ọma, ma nwee ike ịdọtu ma ọ bụ gbagọrọ agbagọ ụfọdụ.
Mụta ihe dị iche iche nke foto tụgharịrị nke ọma na onyonyo 3D nwere ike ịdị aghụghọ, mana iji omume, ị nwere ike ịgbanwe foto gị gaa na foto 3D na-adọrọ adọrọ. Budata LucidPix ugbu a ma gbanwee onyonyo onyonyo gị na 3D ma kesaa ya na onyonyo LucidPix iji gosipụta ntụgharị gị dị ịtụnanya. Echefukwala isonye ndi otu foto 3D nke LucidPix na Facebook maka ndi mmadu kariri ịhụ.
Ị nwere ike Budata LucidPix maka gam akporo na Budata maka iPhone, na-agba mbọ na-ekerịta foto gị na ibe Facebook nke LucidPix maka ohere iji gosipụta ha n’otu ahụ! Nwere ike kerịta ha Kachasị mma n'ime foto 3D nke LucidPix, LucidPix 3D foto na Facebook, ma ọ bụ ibe Facebook Facebook 3D ọzọ!
Ihe ị ga-eme na mpaghara Bay n’oge Covid-19 →← Atụmatụ 3D Foto - Otu esi agbapụ foto kacha mma 3D
Ihe ole na ole ị ga-ebu n'uche Mgbe ị na-eme foto ngosi ogologo oge
Atụmatụ ahụike maka ahụike
5 Atụmatụ iji mee ka ihe kacha mma foto ụmụaka
Ihe 4 To Ga-eburu n’uche Mgbe Fashion Na-eme Ihe Ejiji Ejiji
7 Onwe eserese eserese iji mee ihe n’oge iche iche
n'ike mmụọ nsọ